30915 WED LESSON 1642- Tipiṭaka- from Online FREE Tipiṭaka Research & Practice University (OFTRPU) through http://sarvajan.ambedkar.org From WHITE AWAKENED ONE HOME UNIVERSAL WELFARE FRIEND 668 5A MAIN ROAD 8th CROSS HAL 3rd STAGE BENGALURU KARNATAKA STATE chandrasekhara.tipitaka@gmail.com Converted all the 92 Languages as CLASSICAL LANGUAGES conducts lessons for the entire society and requesting every one to Render
BLISS as FINAL GOAL ! THIS IS AN EXERCISE FOR ALL THE ONLINE VISITING STUDENTS FOR THEIR PRACTICE BUDDHA MEANS AWAKENED ONE WITH AWARENESS - AN EVER ACTIVE MIND in Myanmar(burmese)-Classical မြန်မာ (ဗမာ,
30915 WED LESSON 1642- Tipiṭaka- from Online FREE Tipiṭaka Research & Practice University (OFTRPU) through
in Myanmar(burmese)-Classical မြန်မာ (ဗမာ,
အဖြူရောင် ONE မူလစာမျက်နှာနှိုး
668 5A လမ်းမကြီး
HAL 3rd ဇာတ်စင်
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ list ကိုသင့်ရဲ့ subscription ကိုအတည်ပြုနိုင်ခဲ့သိရသည်။
အသက် 70 အရှေ့အာရှကန်လမ်း, Suite 205
ချီကာဂို, IL 60601
ကမ္ဘာ့ဘာသာတရား၏© Copyright 2015 ခုနှစ်ပါလီမန်
အသက် 70 အရှေ့အာရှကန်လမ်း, Suite 205 ချီကာဂို, IL USA တွင် 60601
တယ်လီဖုန်း 312-629-2990Fax 312-629-2991
ဇာတ်ခိုင်ခံ့စေဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Multi-ဇာတ်, Multi-လူမျိုးရေးနဲ့ multi
သည်းခံစိတ်, အခြားအဘို့အရိုသေလေးစားမှုနှင့်ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ပတ်သက်.
မိဿဟာယအဘို့အကြားဘာသာရေးနှင့် intercultural တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေး,
, အချင်းချင်း Alia,
sub-ဒေသဆိုင်ရာအစပျိုးနှင့်အတူသတိရပါနှင့် “A Common Word” ။
2. အမြဲဘာသာတရားအားလုံးကို, ဘာသာအယူဝါဒနှင့်ယုံကြည်ချက်များအကြားကမ္ဘာ့အကြားဘာသာရေးသဟဇာတကွညောပါ။
ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းများ, အသင်းတော်များ, ဗလီများ,
သူသည်ဤနာကျင်မှုကိုမခံပါဘူး။ ဒါကြောင့်သူကသူ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဖျော်ဖြေရေးပြင်ပအင်အားစုများအားလုံးအမြိုးမြိုးကဖန်တီးနှင့်အခြားသူများ amuse ရန်။ ထို့ကြောင့်ကွဲပြားခြားနားသော Cast, လူမျိုးနှင့်ဘာသာတရားများဖြစ်လျက်ရှိသို့ရောက်ကြ၏။ တစ်ချိန်တည်းပဋိပက္ခတွေမှာပါ။ ဒါကြောင့်တန်းတူရေး,
7. ဒါဟာသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများစတင်ရန် 18 နှစ် theage
တန်းတူရေး, ခွာနှင့် Liberty
bhikkus & အပေါင်းတို့သည်သူ၏ကိုယ်ခန္ဓာကို (kāya)
လမ်းလျှောက်, ရွရွပြေးတာ, စက်ဘီးစီးခြင်း, ပြိုင်ဆိုင်မှုရေကူး, Kalari,
စစ်အုပ်ချုပ်ရေး, ဒို, Kungfu, ကရာတေး, ရှိသမျှကာယအားကစား-Air
လေကြောင်းလိုင်း, မြားပစ်, ပိုက်ကွန်ကိုဂိမ်းများကျော်
Ball ကို, ဘတ်စကက်ဘောမိသားစု, Bat-and ဘောလုံးကို (ကို Safe ဆိပ်), တုတ်
twirling, ဘုတ်အဖွဲ့အားကစား, ဂိမ်း Catch, တောင်တက်ခြင်း, စက်ဘီး, Skibob,
Unicycle, တိုက်ခိုက်ရေးအားကစား: နပန်း, Grappling, ရှိလာကြောင်းတွေ့ရ၏,
ရောနှောဒါမှမဟုတ် hybrid, လက်နက်, တိုက်ပွဲမှာ,
Cue အားကစား, Equine အားကစား, ငါးဖမ်း, disc ကိုအားကစားပျံ, ဂေါက်,
ကျွမ်းဘား, အမဲလိုက်, ရေခဲပြင်အားကစား, စွန်အားကစား, ရောနှောစည်းကမ်း,
Orient, ဘောလုံး, Pilota မိသားစု, ရက်ကက် (သို့မဟုတ်ရက်ကက်) အားကစား,
အဝေးမှထိန်းချုပ်မှု, Sailing, နှင်းအားကစား ,
နှင်းလျှောစီး, စွတ်ဖါးအားကစား, အားကစား Shooting, stack,
ချောင်းနှင့်ဘောလုံးဂိမ်း, ဟော်ကီ, နှင်ထုတ်ခြင်းနှင့် shinty, ဟော်,
ပိုလို, Street, အားကစား, Tag ကိုဂိမ်း, အမှတ်တရ-and ဘောလုံးကို, ရေကူးကန်
& လျှောအားကစား, ကနူးလှေ, Kayaking, ဖောင်, လှေလှော် အခြားလျှောအားကစား,
Ball ကိုအားကစား, ရေအောက်, ဆှအေမြိုးလှုပ်ရှားမှုများ, Subsurface
နှင့်အပန်းဖြေ, ရေငုပ်, အလေးမ, စက်တပ်အားကစား, မော်တော်ကားပြိုင်ကား,
မော်တော်ဘုတ်ပြိုင်ကား, မော်တော်ဆိုင်ကယ်ပြိုင်ကား, ATV ပြိုင်ကား, Marker
အားကစား, စိတ်အားကစား, Card ကိုဂိမ်း, Speed​​cubing,
ဗီဒီယိုဂိမ်းများ (Esports) ယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်း, ပြေးခုံပစ်
ခံနိုငျရညျအားကစား, စွမ်းဆောင်ရည်အားကစား, အားကစား Skating, အားကစား
Skating, စားပွဲတင်အားကစား, Target ကအားကစား, ရေးအဖွဲ့အားကစား, Windsports,
Fiction အားကစား, အေထြေထြအားကစား, လမ်းကြောင်းကိုဖြစ်ပါသည် ကြောင်းဝမ်းနည်းခြင်းနှင့်မြည်တမ်းခြင်းကို၏အောငျ,
ဆငျးရဲဒုက်ခဝဒေနာ, စိတ်ဆင်းရဲမှု (dukkha-domanassa),
နည်းမှန်လမ်းမှန်များ၏ဆည်းထာဝရ Bliss ၏သဘောပေါက်,
bhikkus & အားလုံးအခြားသူများကိုမဆိုအနေအထားတွင်သူ့ခန္ဓာကိုယ် (kāya)
ဖြစ်ပါတယ်စွန့်ပစ်-ထိုင်, ရပ်နေ, မုသာစကားကို, လမ်းလျှောက်, ရွရွပြေးတာ,
စက်ဘီးစီးခြင်း, ပြိုင်ဆိုင်မှုရေကူး, Kalari, စစ်အုပ်ချုပ်ရေး, ဒို,
Kungfu, ကရာတေး, ရှိသမျှကာယအားကစား-Air လေကြောင်းလိုင်း, မြားပစ်, ပိုက်ကွန်ကိုဂိမ်းများကျော်
ပြိုင်ဆိုင်မှုဗီဒီယိုဂိမ်း (Esports), ပြေးခုံပစ်
Fiction အားကစား, အေထြေထြအားကစား, တစ်ဦး bhikku အထဲမှာ ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာခန္ဓာကိုယ်ကစောင့်ကြည့်
- kāyaအတွက်kāya, ātāpīsampajāno, satimā,
လောကီသားဆီသို့ဦးတည်abhijjhā-domanassa အပ်တော်မူပြီးမှ။ သူသည်ātāpīsampajāno, vedanāအတွက်vedanāစောင့်ကြည့်ကျိန်းဝပ်satimā, လောကီသားဆီသို့ဦးတည်abhijjhā-domanassa အပ်တော်မူပြီးမှ။ သူသည်ātāpīsampajāno, citta အတွက် citta စောင့်ကြည့်ကျိန်းဝပ်satimā, လောကီသားဆီသို့ဦးတည်abhijjhā-domanassa အပ်တော်မူပြီးမှ။ သူဟာ·့ကဓမ္မအတွက်·့ātāpīsampajāno Dhamma စောင့်ကြည့်ကျိန်းဝပ်တော်,
satimā, လောကီသားဆီသို့ဦးတည်abhijjhā-domanassa အပ်တော်မူပြီးမှ။
bhikkus & သူ့ခန္ဓာကိုယ် (kāya)
မုသာစကားကို, လမ်းလျှောက်, ရွရွပြေးစက်ဘီးစီး, ပြိုင်ဆိုင်မှုရေကူး,
Kalari, စစ်အုပ်ချုပ်ရေး, ဒို, Kungfu, ကရာတေး, ရှိသမျှကာယအားကစား-Air
လေကြောင်းလိုင်း, မြားပစ် ,
ပိုက်ကွန်ကိုဂိမ်းများကျော် Ball ကို, ဘတ်စကက်ဘောမိသားစု, Bat-and
ဘောလုံးကို (ကို Safe ဆိပ်), တုတ် twirling, ဘုတ်အဖွဲ့အားကစား, Catch
ဂိမ်း, တောင်တက်ခြင်း, စက်ဘီး, Skibob, Unicycle, တိုက်ခိုက်ရေးအားကစား:
နပန်း, Grappling, ရှိလာကြောင်းတွေ့ရ၏, ရောနှောဒါမှမဟုတ် hybrid, လက်နက် ,
တိုက်ပွဲမှာ, Cue အားကစား, Equine အားကစား, ငါးဖမ်း, disc ကိုအားကစားပျံ,
ဂေါက်, ကျွမ်းဘား, အမဲလိုက်, ရေခဲပြင်အားကစား, စွန်အားကစား,
ရောနှောစည်းကမ်း, Orient, ဘောလုံး, Pilota မိသားစု, ရက်ကက်
(သို့မဟုတ်ရက်ကက်) အားကစား, အဝေးမှထိန်းချုပ်မှု, Sailing, နှင်း အားကစား,
& လျှောအားကစား, ကနူးလှေ, Kayaking, ဖောင်, လှေလှော်,
အခြားလျှောအားကစား, Ball ကိုအားကစား, ရေအောက်,
သည်ဟုဝန်ခံလှုပ်ရှားမှုများ, Subsurface နှင့်အပန်းဖြေ, ရေငုပ်, အလေးမ,
စက်တပ်အားကစား, မော်တော်ကားပြိုင်ကား, မော်တော်ဘုတ်ပြိုင်ကား,
မော်တော်ဆိုင်ကယ်ပြိုင်ကား, ATV ပြိုင်ကား, Marker အားကစား, စိတ်အားကစား,
Card ကိုဂိမ်း, Speed​​cubing, မဟာဗျူဟာဘုတ်အဖွဲ့ ဂိမ်း,
Fiction အားကစား, အေထြေထြအားကစား, တစ်ပေ ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာခန္ဓာကိုယ်ကစောင့်ကြည့်လေ့လာ၌ကျိန်းဝပ် bhikku (kāyaအတွက်kāya)? ဒီနေရာမှာ
ပြိုင်ဆိုင်မှုအားကစား Skating ဗီဒီယိုဂိမ်း (Esports), ပြေးခုံပစ်
ခံနိုငျရညျအားကစား, စွမ်းဆောင်ရည်အားကစား, အားကစား Skating,
စားပွဲတင်အားကစား, Target ကအားကစား, ရေးအဖွဲ့အားကစား, Windsports, Fiction
အားကစား, အေထြေထြအားကစား, တစ်ဦး bhikku, သစ်တောသွားပြီဘဲလျက်သို့မဟုတ်အပင်တစ်ပင်၏အမြစ်မှာသွားပြီဟုပြီးမှသို့မဟုတ်တစ်ဦးအချည်းနှီးသောအခန်းကိုသွားပြီပြီးမှ,
ဖြောင့်မတ်ခန္ဓာကိုယ်က (kāya) setting နှင့် sati parimukhaṃ setting,
crosswise ခြေထောက်ခေါက်ထိုင်။ ဤသို့ဖြစ်ခြင်း Sato ကသူထွက်ရှူရှိုက်ဤသို့ Sato ဖြစ်ခြင်းအတွက်ရှူရှိုက်။ အတွက်အသက်ရှူခြင်းရှည်လျားသူနားလည်နိုင်: ‘ငါရှည်လျားအတွက်အသက်ရှူခြင်းပါ၏’; ထွက်အသက်ရှူခြင်းရှည်လျားသူနားလည်နိုင်: ‘ငါရှည်လျားထွက်အသက်ရှူခြင်းပါ၏’; တိုတိုအတွက်အသက်ရှူခြင်းသူနားလည်နိုင်: ‘ငါရေတိုအတွက်အသက်ရှူခြင်းပါ၏’; ထွက်အသက်ရှူခြင်းတိုတောင်းသူနားလည်နိုင်: ‘ငါတိုတောင်းထွက်အသက်ရှူခြင်းပါ၏’; သူသညျမိမိလေ့: ‘တကိုယ်လုံး (kāya) feeling, ငါရှူရှိုက်ကြလိမ့်မည်’; သူသညျမိမိလေ့: ‘တကိုယ်လုံး (kāya) feeling, ငါသည်ထွက်ရှူရှိုက်ကြလိမ့်မည်’; သူသညျမိမိလေ့: ‘ကိုယ်ခန္ဓာကို (kāya-saṅkhāras) ကဆင်းအေးဆေးငါရှူရှိုက်ကြလိမ့်မည်’; သူသညျမိမိလေ့: ‘ကိုယ်ခန္ဓာကို (kāya-saṅkhāras) ကဆင်းအေးဆေး, ငါသည်ထွက်ရှူရှိုက်ကြလိမ့်မည်’ ‘။
(kāya) စွန့်ပစ်-ထိုင်ဖြစ်ပါတယ်ကိုမဆိုအနေအထားတွင် bhikkus &
အားလုံးသူတစ်ပါးရပ်နေ, မုသာစကားကို, လမ်းလျှောက်, ရွရွပြေးစက်ဘီးစီး,
ပြိုင်ဆိုင်မှုရေကူး, Kalari, စစ်အုပ်ချုပ်ရေး, ဒို, Kungfu, ကရာတေး,
အဖြစ်အားလုံးကာယအားကစား-Air လေကြောင်းလိုင်း, မြားပစ် ,
Fiction အားကစား, အေထြေထြအားကစား, လိမ္မာသော ပွတ်တစ်ခုသို့မဟုတ်ပွတ်ရဲ့အလုပ်သင်တစ်ရှည်လျားလှည့်အောင်, နားလည်နိုင်: ‘ငါရှည်လျားလှည့်အောင်ပါ၏’; တိုတောင်းတဲ့အလှည့်အောင်, သူနားလည်နိုင်: ‘ငါတိုတောင်းတဲ့အလှည့်အောင်ပါ၏’; ထိုနည်းတူ, awimmers တစ် bhikku, ရှည်လျားအတွက်အသက်ရှူခြင်း, နားလည်နိုင်: ‘ငါရှည်လျားအတွက်အသက်ရှူခြင်းပါ၏’; ထွက်အသက်ရှူခြင်းရှည်လျားသူနားလည်နိုင်: ‘ငါရှည်လျားထွက်အသက်ရှူခြင်းပါ၏’; တိုတိုအတွက်အသက်ရှူခြင်းသူနားလည်နိုင်: ‘ငါရေတိုအတွက်အသက်ရှူခြင်းပါ၏’; ထွက်အသက်ရှူခြင်းတိုတောင်းသူနားလည်နိုင်: ‘ငါတိုတောင်းထွက်အသက်ရှူခြင်းပါ၏’; သူသညျမိမိလေ့: ‘တကိုယ်လုံး (kāya) feeling, ငါရှူရှိုက်ကြလိမ့်မည်’; သူသညျမိမိလေ့: ‘တကိုယ်လုံး (kāya) feeling, ငါသည်ထွက်ရှူရှိုက်ကြလိမ့်မည်’; သူသညျမိမိလေ့: ‘ကိုယ်ခန္ဓာကို (kāya-saṅkhāras) ကဆင်းအေးဆေးငါရှူရှိုက်ကြလိမ့်မည်’; သူသညျမိမိလေ့: ‘ကိုယ်ခန္ဓာကို (kāya-saṅkhāras) ကဆင်းအေးဆေး, ငါသည်ထွက်ရှူရှိုက်ကြလိမ့်မည်’ ‘။
(kāyaအတွက်kāya) စောင့်ကြည့်ကျိန်းဝပ်; သူခန္ဓာကိုယ်က
(kāya) မှာဖြစ်စဉ်များ၏ samudaya စောင့်ကြည့်ကျိန်းဝပ်တော်,
မှာလွဖြစ်ရပ်များ၏ဖြတ်သန်းစောင့်ကြည့်ကျိန်းဝပ်တော်, ဒါမှမဟုတ်သူက samudaya
စောင့်ကြည့်နှင့်ခန္ဓာကိုယ် (kāya) မှာဖြစ်စဉ်များပရိနိဗ္ဗာန်ကျိန်းဝပ်; သို့မဟုတ်အခြား
[သဘောပေါက်:] “! ဤခန္ဓာကိုယ် (kāya) ဖြစ်ပါတယ်” sati
သူ့ကိုအတွက်ပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်ပါတယ်, ကိုယ့်မျှသာ nana
bhikkus & အပေါင်းတို့သည်သူ၏ကိုယ်ခန္ဓာကို (kāya) မုသာစကားကိုရပ်,
ရွရွပြေးတာ, စက်ဘီးစီးခြင်း, ပြိုင်ဆိုင်မှုရေကူး, Kalari,
Fiction အားကစား, အေထြေထြအားကစား, တစ်ဦး bhikku အထဲမှာ ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာစောင့်ကြည့်ခန္ဓာကိုယ်က (kāyaအတွက်kāya) ။
bhikkus & အားလုံးအခြားသူများသူ့ခန္ဓာကိုယ် (kāya)
အားကစား, အေထြေထြအားကစား, တစ်ဦး bhikku, လမ်းလျှောက်သွားနေစဉ်,
နားလည်နိုင်: ‘ငါလမ်းလျှောက်သွားပါ၏’ ‘, ဒါမှမဟုတ်ရပ်နေစဉ်သူနားလည်နိုင်:’
ငါရပ်ပါ၏ ‘’, ဒါမှမဟုတ်ထိုင်လျက်နေစဉ်သူနားလည်နိုင်: ‘ငါထိုင်လျက်ရှိပါ၏’
‘, ဒါမှမဟုတ်လဲလျောင်းနေစဉ်သူနားလည်နိုင်:’ ငါလဲလျောင်းပါ၏ ‘’ ။ သို့မဟုတ်အခြား, သူ့ခန္ဓာကိုယ် (kāya) စွန့်ပစ်လျက်ရှိသည်ကိုမဆိုအနေအထား, သူညီနားလည်နိုင်သည်။
အားကစား, အေထြေထြအားကစား, တစ်ဦး bhikku, ထိုသင်္ကန်းနှင့်အထက်အင်္ကျီကိုဝတ်ဆင်နေစဉ်နှင့်ပန်းကန်တင်ဆောင်လာသောစဉ်နီးကပ်လာစဉ်များနှင့်ထွက်ခွာစဉ်မတိုင်မီရှာဖွေနေနှင့်ပတ်ပတ်လည်ကိုကြည့်နေစဉ်,
sampajaññaနှင့်အတူပြုမူ, သူsampajaññaနှင့်အတူပြုမူ, သူပြုမူ sampajaññaနှင့်အတူလမ်းလျှောက်နေစဉ်ထိုင်လျက်နေစဉ်အိပ်ပျော်လျက်နေကြသည်ကိုနေစဉ်,
ကိုသောက်သုံးနေစဉ်, ဝါးနေစဉ်, သူမူကား, sampajaññaနှင့်အတူပြုမူသူသည်,
sampajaññaနှင့်အတူပြုမူနိုးဖြစ်ခြင်းနေစဉ် ပြောနေတာစဉ်နှင့်ငြိမ်ဝပ်စွာနေဖြစ်ခြင်းနေစဉ်, သူsampajaññaနှင့်အတူပြုမူ။
bhikku ယူဆပါတယ်ယှဉ်ပြိုင်ဗီဒီယိုဂိမ်း (Esports), ပြေးခုံပစ်
Fiction အားကစား, အေထြေထြအားကစား, ဤသည်အလွန်ကိုယ်ခန္ဓာ,
“ဤခန္ဓာကိုယ် (kāya) ခုနှစ်တွင်ဦးခေါင်း၏ဆံပင်ရှိပါတယ် ကိုယ်ခန္ဓာ၏ဆံပင်,
လက်သည်း, အံသွား, အရေပြား, အမဲသား, ရွတ်, အရိုး, အရိုးတွင်းခြင်ဆီ,
ကျောက်ကပ်, နှလုံး, အသည်း, pleura, သရက်ရွက်, အဆုတ်, အူ, mesentery,
သူ့ရဲ့အကြောင်းအရာတွေကို, မစင်, သည်းခြေ, ချွဲ, ပြည်နှင့်အတူအစာအိမ်, သွေး ချွေး, အဆီ, မျက်ရည်, ဆီ, တံတွေး, နှာခေါင်းချွဲ, စေးနှင့်ဆီး။ “
မုသာစကားကို, လမ်းလျှောက်, ရွရွပြေးတာ, စက်ဘီးစီးခြင်း,
ရှိသမျှကာယအားကစား-Air လေကြောင်းလိုင်း, မြားပစ်,
ဘောလုံးကို (ကို Safe ဆိပ်), တုတ် twirling, ဘုတ်အဖွဲ့အားကစား, ဂိမ်း
Catch, တောင်တက်ခြင်း, စက်ဘီး, Skibob, Unicycle, တိုက်ခိုက်ရေးအားကစား:
နပန်း, Grappling, ရှိလာကြောင်းတွေ့ရ၏, ရောနှောဒါမှမဟုတ် hybrid, လက်နက်တွေ,
(သို့မဟုတ်ရက်ကက်) အားကစား, အဝေးမှထိန်းချုပ်မှု, Sailing, Snow
နဲ့အားကစား, နှင်းလျှောစီး, စွတ်ဖါးအားကစား, အားကစား, stack,
ချောင်းနှင့်ဘောလုံးဂိမ်း, ဟော်ကီ, နှင်ထုတ်ခြင်းနှင့် shinty Shooting,
ဟော်, ပိုလို, Street, အားကစား, Tag ကိုဂိမ်း, အမှတ်တရ-and ဘောလုံးကို,
ရေကူးကန် & လျှောအားကစား, ကနူးလှေ, Kayaking, ဖောင် ,
လှေလှော်, အခြားလျှောအားကစား, Ball ကိုအားကစား, ရေအောက်,
Card ကိုဂိမ်း, Speed​​cubing, မဟာဗျူဟာ အဲဒီမှာဘုတ်အဖွဲ့ဂိမ်း,
Fiction အားကစား, အေထြေထြအားကစား, တစ်အိတ်နှစ်ဦးအဖွင့်ရှိခြင်းနှင့်ထိုကဲ့သို့သောတောင်ပေါ်စပါးစိုက်အဖြစ်စပါးအသီးအနှံ,
စပါး, Mung bean, နွားမ-ပဲ,
“ဒီတောင်ပေါ်မှာစပါးစိုက်ဖြစ်ပါသည်, ဤစပါးဖြစ်ပါသည်, သူတို့အား Mung
အားလုံးကာယအားကစား-Air လေကြောင်းလိုင်းရွရွပြေးတာ, စက်ဘီးစီးခြင်း,
မုသာစကားကို, လမ်းလျှောက်ရပ်နေ,-ထိုင်စွန့်ပစ်လျက်ရှိသည်ကိုမဆိုအနေအထား ,
မြားပစ်, ပိုက်ကွန်ကိုဂိမ်းများကျော် Ball ကို, ဘတ်စကက်ဘောမိသားစု,
Bat-and ဘောလုံးကို (ကို Safe ဆိပ်), တုတ် twirling, ဘုတ်အဖွဲ့အားကစား,
Catch ဂိမ်း, တောင်တက်ခြင်း, စက်ဘီး, Skibob, Unicycle,
တိုက်ခိုက်ရေးအားကစား: နပန်း, Grappling, ရှိလာကြောင်းတွေ့ရ၏,
ရောနှောဒါမှမဟုတ် hybrid ,
လက်နက်, တိုက်ပွဲမှာ, Cue အားကစား, Equine အားကစား, ငါးဖမ်း, disc
ကိုအားကစားပျံ, ဂေါက်, ကျွမ်းဘား, အမဲလိုက်, ရေခဲပြင်အားကစား, စွန်အားကစား,
(သို့မဟုတ်ရက်ကက်) အားကစား, အဝေးမှထိန်းချုပ်မှု, Sailing ,
နှင်းအားကစား, နှင်းလျှောစီး, စွတ်ဖါးအားကစား, အားကစား Shooting, stack,
& လျှောအားကစား, ကနူးလှေ, Kayaking, ဖောင်,
Card ကိုဂိမ်း, Speed​​cubing, မဟာဗြူဟာဘုတ်အဖွဲ့ဂိမ်း,
Fiction အားကစား, အေထြေထြအားကစား, တစ်
bhikku ခြေဘဝါးမှတက်နှင့်၎င်း၏အသားအရေအားဖြင့် delimited
ဒီဟာအလွန်ခန်ဓာကိုယ်စဉ်းစားနေပြီ: “ဤခန္ဓာကိုယ် (kāya)
ကိုယ်ခန္ဓာ၏ဆံပင်, လက်သည်း, အံသွား, အရေပြား, အမဲသား, ရွတ်, အရိုး,
အရိုးတွင်းခြင်ဆီ, ကျောက်ကပ်, နှလုံး, အသည်း, pleura, သရက်ရွက်, အဆုတ်, အူ,
mesentery, သူ့ရဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုနှင့်အတူအစာအိမ်, မစင်, သည်းခြေ, ချွဲ,
ပြည်, သွေး, ချွေး, အဆီ, မျက်ရည်, ဆီ, တံတွေး, နှာခေါင်းချွဲ, စေးနှင့်ဆီး။ “
Card ကိုဂိမ်း, Speed​​cubing, မဟာဗျူဟာ ဘုတ်အဖွဲ့ဂိမ်း,
Fiction အားကစား, အေထြေထြအားကစား, ပေ vedanāအတွက်vedanāစောင့်ကြည့်၌ကျိန်းဝပ်တစ်ဦး bhikku?
အားကစား, အေထြေထြအားကစား, တစ်ဦး bhikku, တစ် sukha vedanāကြုံတွေ့နေရ, undersands: “ငါ sukha vedanāကြုံတွေ့နေရပါ၏”; တစ် dukkha vedanāကြုံတွေ့နေရ, undersands: “ငါ dukkha vedanāကြုံတွေ့နေရပါ၏”; တစ်ဦး adukkham-asukhāvedanāကြုံတွေ့နေရ, undersands: “ငါ adukkham-asukhāvedanāကြုံတွေ့နေရပါ၏”; , sāmisavedanā undersands တစ်ဦး sukha ကြုံတွေ့နေရ: “ငါsāmisavedanāတစ်ဦး sukha ကြုံတွေ့နေရပါ၏”; , nirāmisavedanā undersands တစ်ဦး sukha ကြုံတွေ့နေရ: “ငါnirāmisavedanāတစ်ဦး sukha ကြုံတွေ့နေရပါ၏”; တစ် dukkha vedanāsāmisa, undersands ကြုံတွေ့နေရ: “ငါ dukkha vedanāsāmisaကြုံတွေ့နေရပါ၏”; တစ် dukkha vedanānirāmisa, undersands ကြုံတွေ့နေရ: “ငါ dukkha vedanānirāmisaကြုံတွေ့နေရပါ၏”; တစ်ဦး adukkham-asukhāvedanāsāmisaကြုံတွေ့နေရ, undersands: “ငါ adukkham-asukhāvedanāsāmisaကြုံတွေ့နေရပါ၏”; “ငါသည်တစ်ကြုံတွေ့နေရပါ၏ adukkham-asukhāvedanānirāmisa”: တစ် adukkham-asukhāvedanānirāmisa, undersands ကြုံတွေ့နေရ။
1. ‘’ atthi kāyo ‘’ ti VA ဒယ်အိုး· assa sati paccupaṭṭhitā hoti, yāvadeva nana ·mattāyapaṭissati·mattāya:
ဒီအဖြစ်နိုင်သုတ်၏ trickiest အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့်အမှန်တကယ်ပစ္စုပ္ပန်ကိုဖန်ဆင်းဘယ်လို
sati ရှင်းပြ thecentral
ကြိမ်ကျော်ထပ်ခါတလဲလဲလိမ့်မည်ဖြစ်သောကြောင့်အလွန်အရေးကြီးပါသည်နှင့်။ ဒီနေရာမှာအနည်းငယ်ထို့နောက် alternate ပြန်ဆိုနေသောခေါင်းစဉ်:
VRI: “အခုကသူ့အသိအမြင်တည်တတ်၏:”! ဒါကကိုယ်ဖြစ်၏
“ဒါမှမဟုတ် ‘’ ခန်ဓာရှိပါသည် ‘’ အခြားသတိပဋ္ဌာန်တရားကြောင့်ရှင်းလင်းသောအသိပညာနှင့်ကိုအောကျမေ့၏အတိုင်းအတာအထိသူ့ကို၌တည်သည်”
“ဒါမှမဟုတ် ‘’ ခန်ဓာရှိပါသည် ‘’ ကသူ၏သတိပဋ္ဌာန်တရားကိုသိကျွမ်း & အောကျမေ့၏အတိုင်းအတာအထိထိန်းသိမ်းထားသည်”
“ဒါမှမဟုတ် ‘’ တစ်ဦးကိုယ်တမျိုးရှိ၏ ‘’
“: ကိုယ့်အသိပညာနှင့်ကိုအောကျမေ့ဘို့ ‘’ အလောင်းကိုရှိတယ်ဆိုတဲ့ ‘’
သူ့ခန္ဓာကိုယ် (kāya) စွန့်ပစ်-ထိုင်ဖြစ်ပါတယ်ကိုမဆိုအနေအထားတွင် bhikku
& အားလုံးသူတစ်ပါးရပ်နေ, မုသာစကားကို, လမ်းလျှောက်, ရွရွပြေးစက်ဘီးစီး,
(သို့မဟုတ်ရက်ကက်) အားကစား, အဝေးမှထိန်းချုပ်မှု, Sailing, မိုးပွင့်ပြိုင်ကား
စွတ်ဖါးအားကစား, stack, ချောင်းနှင့်ဘောလုံးဂိမ်း, ဟော်ကီ,
နှင်ထုတ်ခြင်းနှင့် shinty, ဟော်, ပိုလို, Street, အားကစား, Tag ကိုဂိမ်း,
အမှတ်တရ-and ဘောလုံးကို, ရေကူးကန် & လျှောအားကစား, ကနူးလှေ, Kayaking,
ဖောင်, လှေလှော်, အခြားအလျှောအားကစား,
(Esports), ပြေးခုံပစ် (လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်နှင့်လယ်ပြင်),
အီလက်ထရွန်းနစ်အားကစား, ခံနိုငျရညျအားကစား, စွမ်းဆောင်ရည်အားကစား, အားကစား
Skating, အားကစား Skating, စားပွဲတင်အားကစား, Target ကအားကစား,
ရေးအဖွဲ့အားကစား, Windsports, Fiction အားကစား, အေထြေထြ sportss &
(kāya) မုသာစကားကိုရပ်, စွန့်ပစ်-ထိုင်ဖြစ်ပါတယ်, လမ်းလျှောက်,
လေကြောင်းလိုင်း, မြားပစ်, ပိုက်ကွန်ကိုဂိမ်းများကျော် Ball ကို,
ဂိမ်း, တက်ခြင်း, စက်ဘီး, Skibob, Unicycle, တိုက်ခိုက်ရေးအားကစား: နပန်း,
Grappling, ရှိလာကြောင်းတွေ့ရ၏, ရောနှောဒါမှမဟုတ် hybrid, လက်နက်,
တိုက်ပွဲမှာ, Cue အားကစား, Equine အားကစား, ငါးဖမ်း,
disc ကိုအားကစားပျံ, ဂေါက်, ကျွမ်းဘား, အမဲလိုက်, ရေခဲပြင်အားကစား,
စွန်အားကစား, ရောနှောစည်းကမ်း, Orient, ဘောလုံး, Pilota မိသားစု, ရက်ကက်
(သို့မဟုတ်ရက်ကက်) အားကစား, အဝေးမှထိန်းချုပ်မှု, Sailing, နှင်းအားကစား,
နှင်းလျှောစီး, စွတ်ဖါးအားကစား, အားကစား Shooting ,
stack, ချောင်းနှင့်ဘောလုံးဂိမ်း, ဟော်ကီ, နှင်ထုတ်ခြင်းနှင့် shinty,
ရေကူးကန် & လျှောအားကစား, ကနူးလှေ, Kayaking, ဖောင်, လှေလှော်,
ဆှအေမြိုးလှုပ်ရှားမှုများ, Subsurface နှင့်အပန်းဖြေ, ရေငုပ်, အလေးမ,
Card ကိုဂိမ်း, Speed​​cubing, မဟာဗျူဟာဘုတ်အဖွဲ့ဂိမ်း,
Fiction အားကစား, အေထြေထြအားကစား,
ကိုမဆိုအနေအထားကသူ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတစ်ဦး bhikku &
အားလုံးကာယအားကစား-Air လေကြောင်းလိုင်း, မြားပစ်ဘတ်စကက်ဘောမိသားစု,
Bat-နှင့်, ရပ်နေ, မုသာစကားကို, လမ်းလျှောက်, ရွရွပြေးတာ, စက်ဘီးစီးခြင်း,
ပိုက်ကွန်ကိုဂိမ်းများကျော် Ball ကိုစွန့်ပစ်-ထိုင်ဖြစ်ပါတယ် -ball
(ကို Safe ဆိပ်), တုတ် twirling, ဘုတ်အဖွဲ့အားကစား, Catch ဂိမ်း,
တက်ခြင်း, စက်ဘီး, Skibob, Unicycle, တိုက်ခိုက်ရေးအားကစား: နပန်း,
တိုက်ပွဲမှာ, Cue အားကစား, Equine အားကစား, ငါးဖမ်း, Flying disc
ကိုအားကစား, ဂေါက်, ကျွမ်းဘား, အမဲလိုက်, ရေခဲပြင်အားကစား, စွန်အားကစား,
နှင်းလျှောစီး, စွတ်ဖါးအားကစား, အားကစား Shooting, stack, ချောင်းကိုနှင့်ဘောလုံးဂိမ်း,
ဟော်ကီ, နှင်ထုတ်ခြင်းနှင့် shinty, ဟော်, ပိုလို, Street, အားကစား, Tag
ကိုဂိမ်း, အမှတ်တရ-and ဘောလုံးကို, ရေကူးကန် & လျှောအားကစား, ကနူးလှေ,
Kayaking, ဖောင်, လှေလှော်, အခြားလျှောအားကစား, Ball ကိုအားကစား, ရေအောက်,
Subsurface နှင့်အပန်းဖြေ, ရေငုပ်, အလေးမအားကစားစက်တပ်,
မော်တော်ကားပြိုင်ကား, မော်တော်ဘုတ်ပြိုင်ကား, မော်တော်ဆိုင်ကယ်ပြိုင်ကား,
ATV ပြိုင်ကား, Marker အားကစား, စိတ်အားကစား, Card ကိုဂိမ်း,
Speed​​cubing, မဟာဗျူဟာဘုတ်အဖွဲ့ဂိမ်း, ပြိုင်ဆိုင်မှုဗီဒီယိုဂိမ်း
(Esports), ပြေးခုံပစ် (လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ် နှင့်လယ်ပြင်), အားကစား Skating အီလက်ထရောနစ်အားကစား, ခံနိုငျရညျအားကစား,
စွမ်းဆောင်ရည်အားကစား, အားကစား Skating, စားပွဲတင်အားကစား, Target
ကအားကစား, ရေးအဖွဲ့အားကစား, Windsports, Fiction အားကစား,
bhikku & အားလုံးအခြားသူများသူ့ခန္ဓာကိုယ် (kāya), မုသာစကားကို,
ရောနှောဒါမှမဟုတ် hybrid, လက်နက်, တိုက်ပွဲမှာ, Cue အားကစား, Equine အားကစား, ငါးဖမ်း, disc ကိုအားကစားပျံ,
(သို့မဟုတ်ရက်ကက်) အားကစား, အဝေးမှထိန်းချုပ်မှု, Sailing, နှင်းအားကစား
Fiction အားကစား, အေထြေထြအားကစား, ကိုမဆိုအနေအထားအတွက် bhikku &
အားလုံးအခြားသူများသူ့ခန္ဓာကိုယ် ( kāya),-ထိုင်စွန့်ပစ်ရပ်နေ,
မုသာစကားကို, လမ်းလျှောက်, ရွရွပြေးတာ, စက်ဘီးစီးခြင်းဖြစ်ပါတယ်,
ပိုက်ကွန်ကိုဂိမ်းများကျော် Ball ကို, ဘတ်စကက်ဘောမိသားစု, Bat-and- ဘောလုံးကို
တိုက်ပွဲမှာ, Cue အားကစား, Equine အားကစား, ငါးဖမ်း, Flying disc ကို အားကစား,
နှင်းလျှောစီး, စွတ်ဖါးအားကစား, Shooting အားကစား, stack, ချောင်း နှင့်ဘောလုံးဂိမ်း,
Subsurface နှင့်အပန်းဖြေ, ရေငုပ်, အလေးမ, စက်တပ်အားကစား,
(Esports), ပြေးခုံပစ် (လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်နှင့် လယ်ပြင်),
ရေးအဖွဲ့အားကစား, Windsports, Fiction အားကစား, အေထြေထြအားကစား, တစ်ဦး
sukha vedanāကြုံတွေ့နေရ, undersands: “ငါ sukha vedanāကြုံတွေ့နေရပါ၏” ; တစ် dukkha vedanāကြုံတွေ့နေရ, undersands: “ငါ dukkha vedanāကြုံတွေ့နေရပါ၏”; တစ်ဦး adukkham-asukhāvedanāကြုံတွေ့နေရ, undersands: “ငါ adukkham-asukhāvedanāကြုံတွေ့နေရပါ၏”; , sāmisavedanā undersands တစ်ဦး sukha ကြုံတွေ့နေရ: “ငါsāmisavedanāတစ်ဦး sukha ကြုံတွေ့နေရပါ၏”; , nirāmisavedanā undersands တစ်ဦး sukha ကြုံတွေ့နေရ: “ငါnirāmisavedanāတစ်ဦး sukha ကြုံတွေ့နေရပါ၏”; တစ် dukkha vedanāsāmisa, undersands ကြုံတွေ့နေရ: “ငါ dukkha vedanāsāmisaကြုံတွေ့နေရပါ၏”; တစ် dukkha vedanānirāmisa, undersands ကြုံတွေ့နေရ: “ငါ dukkha vedanānirāmisaကြုံတွေ့နေရပါ၏”; တစ်ဦး adukkham-asukhāvedanāsāmisaကြုံတွေ့နေရ, undersands: “ငါ adukkham-asukhāvedanāsāmisaကြုံတွေ့နေရပါ၏”; “ငါသည်တစ်ကြုံတွေ့နေရပါ၏ adukkham-asukhāvedanānirāmisa”: တစ် adukkham-asukhāvedanānirāmisa, undersands ကြုံတွေ့နေရ။
bhikku & အပေါင်းတို့သည်သူ၏ကိုယ်ခန္ဓာကို (kāya) မုသာစကားကိုရပ်,
ခံနိုငျရညျအားကစား, စွမ်းဆောင်ရည်အားကစား, Skating အားကစား, အားကစား
Fiction အားကစား, အေထြေထြ sportss & အားလုံးအခြားသူများအတွက် ကိုမဆိုအနေအထားသူ့ခန္ဓာကိုယ်
(kāya), မုသာစကားကိုရပ်, စွန့်ပစ်-ထိုင်ဖြစ်ပါတယ်လမ်းလျှောက်, ရွရွပြေးတာ,
Kungfu, ကရာတေး, ရှိသမျှကာယအားကစား-Air လေကြောင်းလိုင်း, မြားပစ်,
ပိုက်ကွန်ကိုဂိမ်းများကျော် Ball ကို, ဘတ်စကက်ဘောကမိသားစု ,
Catch ဂိမ်း, တက်ခြင်း, စက်ဘီး, Skibob, Unicycle, တိုက်ခိုက်ရေးအားကစား:
နပန်း, Grappling, ရှိလာကြောင်းတွေ့ရ၏, ရောနှောဒါမှမဟုတ် hybrid, လက်နက်,
တိုက်ပွဲမှာ, Cue အားကစား, Equine အားကစား ,
ငါးဖမ်း, disc ကိုအားကစားပျံ, ဂေါက်, ကျွမ်းဘား, အမဲလိုက်,
ရေခဲပြင်အားကစား, စွန်အားကစား, ရောနှောစည်းကမ်း, Orient, ဘောလုံး, Pilota
မိသားစု, ရက်ကက် (သို့မဟုတ်ရက်ကက်) အားကစား, အဝေးမှထိန်းချုပ်မှု, Sailing,
နှင်းအားကစား, နှင်းလျှောစီး, စွတ်ဖါးအားကစား, သေနတ်ပစ် အားကစား,
အခြားလျှောအားကစား, Ball ကိုအားကစား ,
ရေအောက်, သည်ဟုဝန်ခံလှုပ်ရှားမှုများ, Subsurface နှင့်အပန်းဖြေ, ရေငုပ်,
အလေးမ, စက်တပ်အားကစား, မော်တော်ကားပြိုင်ကား, မော်တော်ဘုတ်ပြိုင်ကား,
ပြိုင်ဆိုင်မှုဗီဒီယိုဂိမ်း (Esports) ကိုမဆိုအနေအထားအတွက်,
ပြေးခုံပစ် (လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်နှင့်လယ်ပြင်), အီလက်ထရွန်းနစ်အားကစား,
Fiction အားကစား, အေထြေထြအားကစား, တစ်ဦး bhikku &
ရဟန်းတို့ရဟန်းသည်တစ် sukha vedanāကြုံတွေ့နေရ, undersands: “ငါဖြစ်၏
“တစ်ဦး sukha vedanāကြုံတွေ့နေရ; တစ် dukkha vedanāကြုံတွေ့နေရ, undersands:
“ငါသည်တစ် dukkha vedanāကြုံတွေ့နေရပါ၏”; တစ်ဦး adukkham-asukhāကြုံတွေ့နေရ
vedanā, undersands: “ငါ adukkham-asukhāvedanāကြုံတွေ့နေရပါ၏”;
sāmisavedanāတစ်ဦး sukha ကြုံတွေ့နေရ, undersands: “ငါကြုံတွေ့နေရပါ၏
sukha vedanāsāmisa “; nirāmisavedanāတစ်ဦး sukha ကြုံတွေ့နေရ, undersands:
“ငါသည်တစ် sukha vedanānirāmisaကြုံတွေ့နေရပါ၏”; တစ် dukkha ကြုံတွေ့နေရ
vedanāsāmisa, undersands: “ငါ dukkha vedanāsāmisaကြုံတွေ့နေရပါ၏”;
“ငါသည်တစ်ကြုံတွေ့နေရပါ၏: တစ် dukkha vedanānirāmisa, undersands ကြုံတွေ့နေရ
dukkha vedanānirāmisa “; တစ်ဦး adukkham-asukhāvedanāsāmisaကြုံတွေ့နေရ,
undersands: “ငါvedanāsāmisaတစ်ဦး-asukhā adukkham ကြုံတွေ့နေရပါ၏”;
တစ်ဦး adukkham-asukhāvedanānirāmisaကြုံတွေ့နေရ, undersands: “ငါဖြစ်၏
vedanānirāmisa “ဟု-asukhā adukkham ကြုံတွေ့နေရ။
ပြည်တွင်းရွှေ့ပြောင်းနှင့်ပြင်ပမှ; သူဖြစ်ရပ်များ၏ samudaya စောင့်ကြည့်ကျိန်းဝပ်
vedanā, ဒါမှမဟုတ်သူက samudaya စောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်ပရိနိဗ္ဗာန်ကျိန်းဝပ်
vedanāအတွက်သဘောတရားများ; သို့မဟုတ်အခြား [သဘောပေါက်:] “ဤvedanāဖြစ်ပါတယ်” sati ဖြစ်ပါသည်
ကိုယ့်မျှသာ nana နှင့်မျှသာpaṭissati၏အတိုင်းအတာအထိသူ့ကိုအတွက်ပစ္စုပ္ပန်ကသူ
တသန့်ကျိန်းဝပ်တော်, နှင့်ကမ္ဘာအတွက်ဘာမှမမှီဝဲမပေးပါဘူး။ ထို့ကြောင့်
ဝေရဟန်းတို့အဘယ်သို့ရဟန်းသည် citta အတွက် citta စောင့်ကြည့်နေကြသနည်း
ရဟန်းတို့ရဟန်းသည် “rāgaနှင့်အတူ citta” အဖြစ်rāgaနှင့်အတူ citta နားလည်နိုင်,
သို့မဟုတ်သူက “rāgaမပါဘဲ citta” အဖြစ်rāgaမပါဘဲ citta နားလည်နိုင်, ဒါမှမဟုတ်သူ
“dosa နှင့်အတူ citta” အဖြစ် dosa နှင့်အတူ citta နားလည်နိုင်, ဒါမှမဟုတ်သူနားလည်နိုင်
“dosa မပါဘဲ citta” အဖြစ် dosa မပါဘဲ citta, ဒါမှမဟုတ်သူနှင့်အတူ citta နားလည်နိုင်
“moha နှင့်အတူ citta” အဖြစ် moha, ဒါမှမဟုတ်သူအဖြစ် moha မပါဘဲ citta နားလည်နိုင်
“moha မပါဘဲ citta” သို့မဟုတ်သူတစ်ဦး “အဖြစ်စုဆောင်းကောက်ယူ citta နားလည်နိုင်
ကောက်ယူစုဆောင်းထားသော citta “သို့မဟုတ်အဖြစ်သူတစ်ဦးသည်အရပ်ရပ်သို့လွ citta နားလည်နိုင်” ဟုအရပ်ရပ်သို့ကွဲပြား
citta “သို့မဟုတ်သူအဖြစ်ကျယ်ပြန့် citta နားလည်နိုင်” “တစ်ခုကျယ်ပြန့် citta, ဒါမှမဟုတ်
သူက “တစ်ဦး unexpanded citta” အဖြစ် unexpanded citta နားလည်နိုင်, ဒါမှမဟုတ်သူ
သူက “တစ်ဦးထက်သာလွန် citta” အဖြစ်တစ်ဦးထက်သာလွန် citta နားလည်နိုင်, ဒါမှမဟုတ်
သူက “တစ်ရာမှာပွို citta” အဖြစ်တုနှို citta နားလည်နိုင်, ဒါမှမဟုတ်
သူက “တစ်ဦးစုစည်း citta” အဖြစ်တစ်ဦးစုစည်း citta နားလည်နိုင်, ဒါမှမဟုတ်
သူက “တစ်ဦး unconcentrated citta” အဖြစ် unconcentrated citta နားလည်နိုင်, ဒါမှမဟုတ်
“တစ်ဦးလွတ်မြောက် citta” အဖြစ်တစ်ဦးလွတ်မြောက် citta နားလည်နိုင်, ဒါမှမဟုတ်သူနားလည်နိုင်
“တစ်ဦး unliberated citta” အဖြစ် unliberated citta ။
ပြည်တွင်းရွှေ့ပြောင်း citta အတွက် citta စောင့်ကြည့်ကျိန်းဝပ်တော်, သို့မဟုတ်သူ citta စောင့်ကြည့်ကျိန်းဝပ်
ပြင်ပမှ citta အတွက်, သို့မဟုတ်သူပြည်တွင်းရွှေ့ပြောင်း citta အတွက် citta စောင့်ကြည့်ကျိန်းဝပ်
နှင့်ပြင်ပမှ; သူ citta အတွက်ဖြစ်ရပ်များ၏ samudaya စောင့်ကြည့်ကျိန်းဝပ်,
သို့မဟုတ်သူ citta ပျောက်ကွယ်သွားဖြစ်ရပ်များ၏သွားတာစောင့်ကြည့်, ဒါမှမဟုတ်သူကကျိန်းဝပ်
ထို samudaya စောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့် citta အတွက်ဖြစ်ရပ်၏ရွေ့သွားကွယ်ပျောက်ကျိန်းဝပ်; သို့မဟုတ်
အခြားသူ [သဘောပေါက်:] “ဤ citta ဖြစ်ပါတယ်” sati ရုံမှသူ့ကိုအတွက်ပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်ပါသည်
မျှသာ nana နှင့်မျှသာpaṭissati၏အတိုင်းအတာအထိသူကတသန့်ကျိန်းဝပ်တော်နှင့်ပေ
citta အတွက် citta စောင့်ကြည့်။
ထို့အပြင်ရဟန်းတို့အဘယ်သို့ရဟန်းသည်အတွက် Dhamma စောင့်ကြည့်ကျိန်းဝပ်ပါဘူး
Dhamma? ဒီနေရာမှာတစ်ဦးရဟန်းတစ်ပါး Dhamma အတွက် Dhamma စောင့်ကြည့်ရဟန်းတို့ကျိန်းဝပ်
ရဟန်းသည်ထိုရည်ညွှန်းနှင့်အတူ Dhamma အတွက် Dhamma စောင့်ကြည့်ကျိန်းဝပ်ပါဘူး
အတွင်းတင်ပြkāmacchanda, နားလည်နိုင်: “အတွင်းkāmacchandaရှိပါတယ်
အကြှနျုပျကို “; အဲဒီမှာအတွင်းတင်ပြkāmacchandaဖြစ်ခြင်း, သူနားလည်နိုင်မရ: “အဲဒီမှာ
ငါ့အထဲမှာအဘယ်သူမျှမkāmacchanda “ဖြစ်ပါတယ်; သူဘယ်လို unarisen နားလည်နိုင်
အတွင်းbyāpādaပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်ခြင်း, နားလည်နိုင်: “byāpādaငါ့အထဲမှာရှိပါတယ်”;
အဲဒီမှာအတွင်းbyāpādaပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်ခြင်း, သူနားလည်နိုင်မရ: “မရှိ
ငါ့အထဲမှာအbyāpāda “; သူက unarisen byāpādaမှကြွလာပုံကိုနားလည်သဘောပေါက်
ပေါ်ထွန်းတော်; သူကပျေါထှနျးbyāpādaစွန့်ပစ်လျက်ရှိသည်ကိုမည်သို့နားလည်သဘောပေါက်; သူက
အတွင်းပစ္စုပ္ပန်, နားလည်နိုင်: “thīnamiddhāငါ့အထဲမှာရှိပါတယ်”; မျှမရှိ
ငါ့အထဲမှာအthīnamiddhā “; သူဘယ်လို unarisen thīnamiddhāနားလည်နိုင်
ပစ္စုပ္ပန် uddhacca-kukkucca အတွင်းမှာနားလည်နိုင်: “ရှိပါတယ်
ငါ့အထဲမှာအ uddhacca-kukkucca “; uddhacca-kukkucca ပစ္စုပ္ပန်ရှိပါတယ်ဖြစ်ခြင်းမဟုတ်
အတွင်း, သူနားလည်နိုင်: “ငါ့အထဲမှာအဘယ်သူမျှမ uddhacca-kukkucca ရှိပါတယ်”; သူ
ထို unarisen uddhacca-kukkucca ပေါ်ထွန်းတော်မှကြွလာပုံကိုနားလည်သဘောပေါက်; သူ
ထိုပျေါထှနျး uddhacca-kukkucca စွန့်ပစ်လျက်ရှိသည်ကိုမည်သို့နားလည်သဘောပေါက်; သူက
အဆိုပါစွန့်ပစ် uddhacca-kukkucca ပျေါပေါကျဖို့မလာပါဘူးဘယ်လောက်နားလည်နိုင်
အဲဒီမှာအတွင်းတင်ပြvicikicchāဖြစ်ခြင်း, သူနားလည်နိုင်မရ: “မရှိ
ငါ့အထဲမှာအvicikicchā “; သူက unarisen vicikicchāကြွလာပုံကိုနားလည်သဘောပေါက်
ထ; သူကပျေါထှနျးvicikicchāစွန့်ပစ်လျက်ရှိသည်ကိုမည်သို့နားလည်သဘောပေါက်; သူက
ထို့ကြောင့်သူကပြည်တွင်းရွှေ့ပြောင်း Dhamma အတွက် Dhamma စောင့်ကြည့်ကျိန်းဝပ်,
သို့မဟုတ်သူပြင်ပမှ Dhamma အတွက်စောင့်ကြည့်လေ့လာ Dhamma ကျိန်းဝပ်တော်, ဒါမှမဟုတ်သူကကျိန်းဝပ်
ပြည်တွင်းရွှေ့ပြောင်းနှင့်ပြင်ပမှ Dhamma အတွက် Dhamma စောင့်ကြည့်; သူကျိန်းဝပ်
Dhamma အတွက်ဖြစ်ရပ်များ၏ samudaya စောင့်ကြည့်, ဒါမှမဟုတ်သူကစောင့်ကြည့်ကျိန်းဝပ်
Dhamma အတွက်ဖြစ်ရပ်များ၏ပယ်ရှား samudaya နှင့်ဖြတ်သန်း; သို့မဟုတ်အခြား [သဘောပေါက်:]
“ဒီ Dhamma များမှာ!” sati ရုံမျှသာ၏အတိုင်းအတာအထိသူ့ကိုအတွက်ပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်ပါသည်
nana နှင့်မျှသာpaṭissati, သူတသန့်ကျိန်းဝပ်နှင့်မှတွယ်ကပ်မပါဘူး
ကမ်ဘာ​​ပျေါတှငျဘာမှမ။ ထို့ကြောင့်, ရဟန်းသည်စောင့်ကြည့်ရဟန်းတို့ကျိန်းဝပ်
ငါးnīvaraṇasရည်ညွှန်းနှင့်အတူ Dhamma အတွက် Dhamma ။
ထို့အပြင်ရဟန်းတို့ရဟန်းသည် Dhamma အတွက် Dhamma စောင့်ကြည့်ကျိန်းဝပ်
ရဟန်းသည်ငါးရည်ညွှန်းနှင့်အတူ Dhamma အတွက် Dhamma စောင့်ကြည့်ကျိန်းဝပ်
ဒီနေရာမှာရဟန်းတို့ရဟန်းသည် [ပိုင်းခြား]: “ဒီလိုဖြစ်ပါတယ်
rūpa, ထိုကဲ့သို့သောrūpa၏ samudaya ဖြစ်ပါသည်, ထိုကဲ့သို့သောrūpa၏ရွေ့သွားကွယ်ပျောက်တတ်၏
ထိုကဲ့သို့သော, ထိုကဲ့သို့သောလွvedanā, ထိုကဲ့သို့သောvedanā၏ samudaya ဖြစ်ပါတယ်ဖြတ်သန်းဖြစ်ပါတယ်
vedanā၏, ထိုကဲ့သို့သော, ထိုကဲ့သို့သောsaññā၏ samudaya ဖြစ်ပါသည်, ထိုကဲ့သို့သောsaññāဖြစ်ပါတယ်
saññāပရိနိဗ္ဗာန်; ထိုကဲ့သို့သောsaṅkhāraဖြစ်ပါတယ်, ထိုကဲ့သို့သော၏ samudaya ဖြစ်ပါသည်
saṅkhāra, ထိုကဲ့သို့သောလွsaṅkhāra၏သွားတာဖြစ်ပါတယ်, ထိုကဲ့သို့သောထိုကဲ့သို့သောဖြစ်ပါတယ်viññāṇaဖြစ်ပါတယ်
viññāṇa၏ samudaya, ထိုကဲ့သို့သော “viññāṇa၏ကွာသွားတာဖြစ်ပါတယ်။
သူပြည်တွင်းရွှေ့ပြောင်း Dhamma အတွက် Dhamma စောင့်ကြည့်ကျိန်းဝပ်တော်, ဒါမှမဟုတ်သူကကျိန်းဝပ်
ပြင်ပမှ Dhamma အတွက် Dhamma စောင့်ကြည့်, ဒါမှမဟုတ်သူ Dhamma စောင့်ကြည့်ကျိန်းဝပ်
Dhamma အတွက်ပြည်တွင်းနှင့်ပြင်ပမှ; သူက samudaya စောင့်ကြည့်ကျိန်းဝပ်
Dhamma အတွက်သဘောတရားများ, ဒါမှမဟုတ်သူကကွယ်ပျောက်၏သွားတာစောင့်ကြည့်ကျိန်းဝပ်၏
Dhamma အတွက်သဘောတရားများ, ဒါမှမဟုတ်သူက samudaya နှင့်လာတာနဲ့အမျှစောင့်ကြည့်ကျိန်းဝပ်
လွ Dhamma အတွက်ဖြစ်ရပ်များ၏; သို့မဟုတ်အခြား [သဘောပေါက်:] “ဒီ Dhamma များမှာ!”
sati, သူ့ကိုအတွက်ပစ္စုပ္ပန်ရုံမျှသာ nana ၏အတိုင်းအတာနှင့်မျှသာဖြစ်ပါသည်
paṭissati, သူတသန့်ကျိန်းဝပ်လျက်, တစုံတခုမှတွယ်ကပ်မပါဘူး
ကမ္ဘာကြီးကို။ ထို့ကြောင့်ရဟန်းတို့ရဟန်းသည် Dhamma အတွက် Dhamma စောင့်ကြည့်ကျိန်းဝပ်,
ရဟန်းတို့ရဟန်းသည် cakkhu နားလည်နိုင်သူ, rūpaနားလည်နိုင်
ထို unarisen saṃyojanaပေါ်ထွန်းတော်မှကြွလာပုံကိုနားလည်သဘောပေါက်သူကနားလည်နိုင်
sota နားလည်သူ sadda နားလည်နိုင်တော်မူလျှင်, saṃyojanaနားလည်နိုင်
အဲဒီနှစ်ခုလာခြင်းပေါ်ထွန်းသောသူဘယ်လို unarisen နားလည်နိုင်
သူဟာနားလည် ghana နားလည်နိုင်
gandha သူ, အဲဒီနှစ်ခုလာခြင်းဖြစ်ပေါ်လာရသောsaṃyojanaနားလည်နိုင်
jivha နားလည်သူ rasa နားလည်နိုင်တော်မူလျှင်, saṃyojanaနားလည်နိုင်
နှစ်ခု, သူက, အ unarisen saṃyojanaပေါ်ထွန်းတော်မှကြွလာပုံကိုနားလည်သဘောပေါက်
Mana နားလည်သူ Dhamma နားလည်နိုင်တော်မူလျှင်, saṃyojanaနားလည်နိုင်
ထို့ကြောင့်သူအတွက် Dhamma စောင့်ကြည့်ကျိန်းဝပ်
ပြည်တွင်းရွှေ့ပြောင်း dhammas, ဒါမှမဟုတ်သူ Dhamma အတွက် Dhamma စောင့်ကြည့်ကျိန်းဝပ်
ပြင်ပမှ, ဒါမှမဟုတ်သူကပြည်တွင်းရွှေ့ပြောင်း Dhamma အတွက် Dhamma စောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်ကျိန်းဝပ်
ပြင်ပမှ; သူ Dhamma အတွက်ဖြစ်ရပ်များ၏ samudaya စောင့်ကြည့်ကျိန်းဝပ်တော်, သို့မဟုတ်
သူ Dhamma ပျောက်ကွယ်သွားဖြစ်ရပ်များ၏သွားတာစောင့်ကြည့်ကျိန်းဝပ်တော်, သို့မဟုတ်သူ
ထို samudaya စောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့် Dhamma အတွက်ဖြစ်ရပ်၏ရွေ့သွားကွယ်ပျောက်ကျိန်းဝပ်;
သို့မဟုတ်အခြား [သဘောပေါက်:] “! သည်ဤ Dhamma ရှိပါတယ်” sati ့သူ့ကိုအတွက်ပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်ပါသည်
မျှသာ nana နှင့်မျှသာpaṭissati၏အတိုင်းအတာအထိသူကတသန့်ကျိန်းဝပ်တော်နှင့်
ခြောက်နိုင်ငံပြည်တွင်းရေးရည်ညွှန်းနှင့်အတူ Dhamma အတွက် Dhamma စောင့်ကြည့်ကျိန်းဝပ်
sati အတွင်းတင်ပြsambojjhaṅga, နားလည်နိုင်: “ကို sati ရှိပါတယ်
ငါ့အထဲမှာအsambojjhaṅga “; ထို sati sambojjhaṅgaပစ္စုပ္ပန်ရှိပါတယ်ဖြစ်ခြင်းမဟုတ်
အတွင်း, သူနားလည်နိုင်: “ငါ့အထဲမှာအဘယ်သူမျှမ sati sambojjhaṅgaရှိပါတယ်”; သူ
ထို unarisen sati sambojjhaṅgaပေါ်ထွန်းတော်မှကြွလာပုံကိုနားလည်သဘောပေါက်; သူ
ထိုပျေါထှနျး sati sambojjhaṅgaစုံလင်ခြင်းမှဖွံ့ဖြိုးပြီးဘယ်လိုနားလည်သည်။
အဲဒီမှာ dhammavicaya ဖြစ်ခြင်းသူမူကား, အတွင်းတင်ပြsambojjhaṅga
နားလည်နိုင်: “ကို dhammavicaya sambojjhaṅgaငါ့အထဲမှာရှိပါတယ်”; ဟိုမှာ
အတွင်း၌ dhammavicaya sambojjhaṅgaပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်ခြင်း, မသူနားလည်နိုင်:
“မ dhammavicaya sambojjhaṅgaငါ့အထဲမှာရှိပါတယ်”; သူကိုဘယ်လိုနားလည်သဘောပေါက်
ထို unarisen dhammavicaya sambojjhaṅgaပေါ်ထွန်းတော်မှကြွလာ; သူနားလည်နိုင်
ဘယ်လိုပျေါထှနျး dhammavicaya sambojjhaṅgaစုံလင်ခြင်းမှဖွံ့ဖြိုးပြီးဖြစ်ပါတယ်။
ထိုvīriyaအတွင်းတင်ပြsambojjhaṅgaဖြစ်ခြင်း, သူနားလည်နိုင်: “ရှိပါတယ်
ငါ့အထဲမှာအကိုvīriyasambojjhaṅga “; ထိုအရပ်၌vīriyaဖြစ်ခြင်းမဟုတ်
အတွင်းတင်ပြsambojjhaṅga, သူနားလည်နိုင်: “အဘယ်သူမျှမvīriyaရှိပါတယ်
ငါ့အထဲမှာအsambojjhaṅga “; သူဘယ်လို unarisen vīriyaနားလည်နိုင်
အတွင်းတင်ပြsambojjhaṅga, သူနားလည်နိုင်: “စိတ်ကြင်နာတတ်သောရှိပါတယ်
ငါ့အထဲမှာအsambojjhaṅga “; စိတ်ကြင်နာတတ်သောsambojjhaṅgaပစ္စုပ္ပန်ရှိပါတယ်ဖြစ်ခြင်းမဟုတ်
အတွင်း, သူနားလည်နိုင်: “ငါ့အထဲမှာမသနားsambojjhaṅgaရှိပါတယ်”; သူ
ထို unarisen သနားခြင်းsambojjhaṅgaပေါ်ထွန်းတော်မှကြွလာပုံကိုနားလည်သဘောပေါက်; သူ
အတွင်းပစ္စုပ္ပန်ကို passaddhi sambojjhaṅgaဖြစ်ခြင်း, သူနားလည်နိုင်: “အဲဒီမှာ
ထို passaddhi sambojjhaṅga “ငါ့ကိုအတွင်းဖြစ်၏ ထို passaddhi ရှိပါတယ်ဖြစ်ခြင်းမဟုတ်
အတွင်းတင်ပြsambojjhaṅga, သူနားလည်နိုင်: “အဘယ်သူမျှမ passaddhi ရှိပါတယ်
ငါ့အထဲမှာအsambojjhaṅga “; သူဘယ်လို unarisen passaddhi နားလည်နိုင်
sambojjhaṅgaပေါ်ထွန်းတော်မှကြွလာ; သူက passaddhi ပျေါထှနျးကိုမည်သို့နားလည်သဘောပေါက်
အတွင်းတင်ပြsambojjhaṅga, သူနားလည်နိုင်: “ကိုသမာဓိလည်းမရှိ
ငါ့အထဲမှာအsambojjhaṅga “; ထိုသမာဓိsambojjhaṅgaရှိပါတယ်ဖြစ်ခြင်းမဟုတ်
အကြှနျုပျကို “; သူက unarisen သမာဓိsambojjhaṅgaမှကြွလာပုံကိုနားလည်သဘောပေါက်
အတွင်း, သူနားလည်နိုင်: “ကိုupekkhāsambojjhaṅgaငါ့အထဲမှာရှိပါတယ်”;
unarisen upekkhāsambojjhaṅgaပေါ်ထွန်းတော်မှကြွလာ; သူဘယ်လိုနားလည်နိုင်
ဒီနေရာမှာရဟန်းတို့ရဟန်းသည်, အ sati ရှိပါတယ်ဖြစ်ခြင်း
အတွင်းတင်ပြsambojjhaṅga, နားလည်နိုင်: “ကို sati ရှိပါတယ်
ပစ္စုပ္ပန်သမာဓိsambojjhaṅgaအတွင်း, သူနားလည်နိုင်: “ကိုလည်းမရှိ
ငါ့အထဲမှာသမာဓိsambojjhaṅga “; ထိုအရပ်၌သမာဓိဖြစ်ခြင်းမဟုတ်
အတွင်းတင်ပြsambojjhaṅga, သူနားလည်နိုင်: “အဘယ်သူမျှမသမာဓိလည်းမရှိ
ငါ့အထဲမှာအsambojjhaṅga “; သူဘယ်လို unarisen သမာဓိနားလည်နိုင်
upekkhāအတွင်းတင်ပြsambojjhaṅga, သူနားလည်နိုင်: “ကိုလည်းမရှိ
ငါ့အထဲမှာအupekkhāsambojjhaṅga “; ထိုupekkhāရှိပါတယ်ဖြစ်ခြင်းမဟုတ်
အတွင်းတင်ပြsambojjhaṅga, သူနားလည်နိုင်: “အဘယ်သူမျှမupekkhāရှိပါတယ်
ငါ့အထဲမှာအsambojjhaṅga “; သူဘယ်လို unarisen upekkhāနားလည်နိုင်
ပြည်တွင်းရွှေ့ပြောင်း Dhamma အတွက် Dhamma စောင့်ကြည့်, ဒါမှမဟုတ်သူ Dhamma စောင့်ကြည့်ကျိန်းဝပ်
ပြင်ပမှ Dhamma အတွက်, သို့မဟုတ်သူ Dhamma အတွက် Dhamma စောင့်ကြည့်ကျိန်းဝပ်
Dhamma, ဒါမှမဟုတ်သူက samudaya စောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်ပရိနိဗ္ဗာန်ကျိန်းဝပ်
Dhamma အတွက်သဘောတရားများ; သို့မဟုတ်အခြား [သဘောပေါက်:] “! သည်ဤ Dhamma ရှိပါတယ်” sati ဖြစ်ပါသည်
ရဟန်းတို့ရဟန်းသည်ရည်ညွှန်းကိုးကားနှင့်အတူ Dhamma အတွက် Dhamma စောင့်ကြည့်ကျိန်းဝပ်
Santaṃ VA ajjhattaṃသနားခြင်း·sambojjhaṅgaṃ
‘’ atthi ငါ့ကိုအajjhattaṃသနားခြင်း·sambojjhaṅgo ‘’ ti pajānāti; တစ်·santaṃ VA
ajjhattaṃသနားခြင်း·sambojjhaṅgaṃ ‘’ ဎ· atthi ငါ့ကိုအajjhattaṃသနားခြင်း·sambojjhaṅgo ‘’ ti
pajānāti; yathāတစ်· uppannassa သနားခြင်း·sambojjhaṅgassauppādo hoti တမ် CA
CA pajānāti; yathā uppannassa သနားခြင်း·sambojjhaṅgassabhāvanāyapāripūrī CA
hoti တမ် CA pajānāti။
အတွင်း, သူနားလည်နိုင်: “ငါ့အထဲမှာအစိတ်ကြင်နာတတ်သောsambojjhaṅgaရှိပါတယ်”;
unarisen သနားခြင်းsambojjhaṅgaပေါ်ထွန်းတော်မှကြွလာ; သူကပျေါထှနျးကိုမည်သို့နားလည်သဘောပေါက်
ajjhattaṃ passaddhi ·sambojjhaṅgaṃ ‘’ atthi ငါ့ကိုအajjhattaṃ
passaddhi ·sambojjhaṅgo ‘’ ti pajānāti; တစ်·santaṃ VA ajjhattaṃ
passaddhi ·sambojjhaṅgaṃ ‘’ ဎ· atthi ငါ့ကိုအajjhattaṃ passaddhi ·sambojjhaṅgo ‘’ ti
pajānāti; yathāတစ်· uppannassa passaddhi ·sambojjhaṅgassauppādo hoti CA
တမ် CA pajānāti; yathā uppannassa passaddhi ·sambojjhaṅgassabhāvanāya CA
pāripūrī hoti တမ်pajānāti CA ။
ထို passaddhi ရှိပါတယ်ဖြစ်ခြင်း
အတွင်းတင်ပြsambojjhaṅga, သူနားလည်နိုင်: “ကို passaddhi ရှိပါတယ်
ငါ့အထဲမှာအsambojjhaṅga “; ထို passaddhi sambojjhaṅgaရှိပါတယ်ဖြစ်ခြင်းမဟုတ်
အတွင်းတင်ပြ, သူနားလည်နိုင်: “အဘယ်သူမျှမ passaddhi sambojjhaṅgaရှိပါတယ်
“ငါ့အထဲမှာအ; သူက unarisen passaddhi sambojjhaṅgaကြွလာပုံကိုနားလည်သဘောပေါက်
ထ; သူကပျေါထှနျး passaddhi sambojjhaṅgaသည်မည်မျှနားလည်သဘောပေါက်
Santaṃ VA ajjhattaṃ
သမာဓိ·sambojjhaṅgaṃ ‘’ atthi ငါ့ကိုအajjhattaṃသမာဓိ·sambojjhaṅgo ‘’ ti
pajānāti; တစ်·santaṃ VA ajjhattaṃသမာဓိ·sambojjhaṅgaṃ ‘’ ဎ·ငါ့ကိုအ atthi
ajjhattaṃသမာဓိ·sambojjhaṅgo ‘’ ti pajānāti; yathāတစ်· CA uppannassa
သမာဓိ·sambojjhaṅgassauppādo hoti တမ်pajānāti CA; yathā uppannassa CA
သမာဓိ·sambojjhaṅgassabhāvanāyapāripūrī hoti တမ် CA pajānāti။
အတွင်းပစ္စုပ္ပန်ကိုသမာဓိsambojjhaṅgaဖြစ်ခြင်း, သူနားလည်နိုင်: “အဲဒီမှာ
ထိုသမာဓိsambojjhaṅga “ငါ့ကိုအတွင်းဖြစ်၏ ထိုအရပ်၌သမာဓိဖြစ်ခြင်းမဟုတ်
ပြည်တွင်းရွှေ့ပြောင်း Dhamma အတွက် Dhamma စောင့်ကြည့်ကျိန်းဝပ်တော်, ဒါမှမဟုတ်သူကစောင့်ကြည့်ကျိန်းဝပ်
ပြင်ပမှ Dhamma အတွက် Dhamma, ဒါမှမဟုတ်သူ Dhamma အတွက် Dhamma စောင့်ကြည့်ကျိန်းဝပ်
ပြည်တွင်းရွှေ့ပြောင်းနှင့်ပြင်ပမှ; သူ၏ samudaya စောင့်ကြည့်ကျိန်းဝပ်
Dhamma အတွက်သဘောတရားများ, ဒါမှမဟုတ်သူကကွယ်ပျောက်၏သွားတာစောင့်ကြည့်ကျိန်းဝပ်